Ciidamo lagu wareejiyay Baro Koontorool oo ku yaalla Gaalkacyo – Radio Baidoa
Ciidamo lagu wareejiyay Baro Koontorool oo ku yaalla Gaalkacyo
By Webmaster	 On May 29, 2020
Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dawladda Galmudug ayaa saakay si rasmi ah ugu wareejisay wasaaradda Maaliyadda Galmudug baraha kontoroolka Magaalada a Gaalkayo,halkaas oo dhawaan Wasaaradad Amniga kala wareegtay maleeshiyaad gacanta ku haayay.
War kasoo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha Galmudug ayaa lagu sheegay in tallaabadan loo qaaday si hawlihii canshuur uruurintu ay uga bilaabato ayadoo ay Goobjoog ahaayeen ciidamada ilaalada Canshuuraha Galmudug.
Munaasabadda mas’uuliyad kala wareegidda ayaa ka dhacday kontoroolka weyn ee Gaalkacyo, ayadoo wasiirka amniga Galmudug uu ku wareejiyey wasiiru-dawlaha wasaaradda Maaliyadda Galmudug.
Wasiirka Wasaaradda Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa xalay sheegay in Ciidamada Booliska Galmudug ay ku guuleysteen iay ka adkaadaan maleeshiyaad uu sheegay inay awood ku joogeen Magaalada Gaalkacyo.
Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegay inay bilaabeen baarista dadkii lagu dilay Gololeey
QM oo ka hadashay Dhalinyaradii dil wadareedka loogu geystay Gololeey